ယာဉျမောငျးတဈယောကျရဲ့ ရယျရမလို၊ ဝမျးနညျးရမလို အဖွဈအပကျြ။ – SoShwe
Home/Other/Funny/ယာဉျမောငျးတဈယောကျရဲ့ ရယျရမလို၊ ဝမျးနညျးရမလို အဖွဈအပကျြ။
ယာဉျမောငျးတဈယောကျရဲ့ ရယျရမလို၊ ဝမျးနညျးရမလို အဖွဈအပကျြ။
So Shwe February 16, 2022	Funny Leaveacomment
အောကျမှာဖျောပွထားတဲ့ ဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရငျတော့ ယာဉျမောငျးလိုငျစငျရပွီး ၁၀ မိနဈအကွာမှာ ယာဉျတိုကျမှုကြူးလှနျမိတဲ့ ယာဉျမောငျးတဈယောကျရဲ့ ကံဆိုးမှုကို တှမွေ့ငျရမှာပဲဖွဈပါတယျ။ ဘဝက အခုမှစပွီး အဆငျပွသေလိုရှိသေးတယျ။ ကံတရားကွီးက နောကျထပျပွဿနာအသဈတဈခုကို အဆိုပါယာဉျမောငျးဆီ ပို့ပေးလိုကျသလိုပါပဲ။ ယာဉျမောငျးရတာက လှယျကူသလောကျ စံနှုနျးမှီတဲ့ အရညျအသှေးရှိ ယာဉျမောငျးတဈဦးဖွဈကွောငျး အတညျပွုခံရတဲ့ လိုငျစငျရဖို့က ဘယျလောကျခကျခဲသလဲဆိုတာကိုတော့ ယာဉျမောငျးလိုငျစငျရဖို့အတှကျ စာမေးပှဲဖွဆေိုပွီး ယာဉျကိုစနဈတကမြောငျးပွရတဲ့ ယာဉျမောငျးတှကေသာ အသိဆုံးဖွဈပါတယျ။
Mr. Zhang လို့အမညျရတဲ့ ယာဉျမောငျးသူဟာ ယာဉျမောငျးလိုငျစငျ ရရှိပွီးနောကျ သူ့ရဲ့ယာဉျကို တရုတျနိုငျငံတောငျပိုငျး Zunyi မွို့ပျေါမှာရှိတဲ့ တံတားကဉျြးကဉျြးလေးပျေါကို မောငျးထှကျလာတဲ့အခြိနျမှာပဲ မထငျမှတျထားတဲ့ ယာဉျမတျောဆမှုတဈခုနဲ့ ကွုံကွိုကျခဲ့ရခွငျးဖွဈပါတယျ။ ဘယျလောကျတောငျမှ ကံဆိုးလိုကျတဲ့သူလဲနျော။
သတငျးဌာနတဈခုက Mr. Zhang ရဲ့ အသေးစိတျဖွဈရပျကို မေးမွနျးလာတဲ့အခြိနျမှာတော့ Mr. Zhang က “ကြှနျတျောက လမျးကဉျြးကဉျြးလေးအတိုငျး ကားမောငျးလာရငျး ဖုနျးကိုလှမျးယူပွီး စာဖတျမယျလုပျနတေုနျး တံတားကဉျြးကဉျြးလေးပျေါရောကျလာပါတယျ။ ကြှနျတျောအရှကေို့ကွညျ့လိုကျတော့ ဒီတံတားကဉျြးကဉျြးပျေါမှာ လမျးလြှောကျနသေူတှကေိုမွငျတော့ သူတို့ကိုတိုကျမိမှာကွောကျသှားပွီး ရှောငျတိမျးဖို့ ဘယျဘကျကိုကှလေို့ကျရာကနေ အရှိနျမထိနျးနိုငျဘဲ ရထေဲကိုတဈဟုနျထိုး ကသြှားတာပဲဖွဈပါတယျ။” လို့ ဆိုခဲ့ပါတယျ။
Mr.Zhang က “ကံကောငျးခငျြတော့ ကားကရပေျေါမှာ ပေါလောမြောနတေုနျး ကားတံခါးကိုကနျပွီး ရနှေဈနတေဲ့ ကားထဲကနေ ထှကျနိုငျခဲ့ပါတယျ . . . “လို့ ထပျလောငျး ပွောပွခဲ့ပါတယျ။ ဒသေခံတှကေလညျး Mr.Zhang ကို ကူညီကယျဆယျပေးခဲ့တာကွောငျ့ Mr.Zhang တဈယောကျ အသကျဘေးအန်တရာယျကနေ လှတျမွောကျခဲ့ကာ ရဲတှရေောကျရှိလာတဲ့အခြိနျမှာတော့ သူ့ရဲ့ကားကိုလညျး ကရိနျးနဲ့ ဆယျယူနိုငျခဲ့တယျလို့ သိရှိရပါတယျ။
Mr.Zhang က အဆိုပါယာဉျမတျောတဆမှုအတှကျ အပွဈပေးခံရလားဆိုတာ အတိအကမြသိရသေးပမေယျ့ သူ့ရဲ့ယာဉျမတျောတဆကြူးလှနျမိခဲ့တဲ့ ဖွဈရပျကို အဆိုပါတံတားနားမှာရှိတဲ့ လုံခွုံရေးမှတျတမျးတငျကငျမရာက မှတျတမျးတငျဖမျးယူမိခဲ့ပွီး လူမှုကှနျရကျအသုံးပွုသူအမြားအပွားက ၄ငျးတို့ရဲ့ အကောငျ့တှမှော မြှဝပွေသခဲ့တာနဲ့တငျ လုံလောကျတဲ့ ပွဈဒဏျပေးခံရနိုငျပါတယျ။
ယာဉ်မောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ရယ်ရမလို၊ ဝမ်းနည်းရမလို အဖြစ်အပျက်။
အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ ဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင်တော့ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရပြီး ၁၀ မိနစ်အကြာမှာ ယာဉ်တိုက်မှုကျူးလွန်မိတဲ့ ယာဉ်မောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ကံဆိုးမှုကို တွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘဝက အခုမှစပြီး အဆင်ပြေသလိုရှိသေးတယ်။ ကံတရားကြီးက နောက်ထပ်ပြဿနာအသစ်တစ်ခုကို အဆိုပါယာဉ်မောင်းဆီ ပို့ပေးလိုက်သလိုပါပဲ။ ယာဉ်မောင်းရတာက လွယ်ကူသလောက် စံနှုန်းမှီတဲ့ အရည်အသွေးရှိ ယာဉ်မောင်းတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုခံရတဲ့ လိုင်စင်ရဖို့က ဘယ်လောက်ခက်ခဲသလဲဆိုတာကိုတော့ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရဖို့အတွက် စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီး ယာဉ်ကိုစနစ်တကျမောင်းပြရတဲ့ ယာဉ်မောင်းတွေကသာ အသိဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
Mr. Zhang လို့အမည်ရတဲ့ ယာဉ်မောင်းသူဟာ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရရှိပြီးနောက် သူ့ရဲ့ယာဉ်ကို တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း Zunyi မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ တံတားကျဉ်းကျဉ်းလေးပေါ်ကို မောင်းထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပဲ မထင်မှတ်ထားတဲ့ ယာဉ်မတော်ဆမှုတစ်ခုနဲ့ ကြုံကြိုက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်တောင်မှ ကံဆိုးလိုက်တဲ့သူလဲနော်။
သတင်းဌာနတစ်ခုက Mr. Zhang ရဲ့ အသေးစိတ်ဖြစ်ရပ်ကို မေးမြန်းလာတဲ့အချိန်မှာတော့ Mr. Zhang က “ကျွန်တော်က လမ်းကျဉ်းကျဉ်းလေးအတိုင်း ကားမောင်းလာရင်း ဖုန်းကိုလှမ်းယူပြီး စာဖတ်မယ်လုပ်နေတုန်း တံတားကျဉ်းကျဉ်းလေးပေါ်ရောက်လာပါတယ်။ ကျွန်တော်အရှေ့ကိုကြည့်လိုက်တော့ ဒီတံတားကျဉ်းကျဉ်းပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်နေသူတွေကိုမြင်တော့ သူတို့ကိုတိုက်မိမှာကြောက်သွားပြီး ရှောင်တိမ်းဖို့ ဘယ်ဘက်ကိုကွေ့လိုက်ရာကနေ အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ ရေထဲကိုတစ်ဟုန်ထိုး ကျသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။” လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
Mr.Zhang က “ကံကောင်းချင်တော့ ကားကရေပေါ်မှာ ပေါလောမျောနေတုန်း ကားတံခါးကိုကန်ပြီး ရေနှစ်နေတဲ့ ကားထဲကနေ ထွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ် . . . “လို့ ထပ်လောင်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ဒေသခံတွေကလည်း Mr.Zhang ကို ကူညီကယ်ဆယ်ပေးခဲ့တာကြောင့် Mr.Zhang တစ်ယောက် အသက်ဘေးအန္တရာယ်ကနေ လွတ်မြောက်ခဲ့ကာ ရဲတွေရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာတော့ သူ့ရဲ့ကားကိုလည်း ကရိန်းနဲ့ ဆယ်ယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
Mr.Zhang က အဆိုပါယာဉ်မတော်တဆမှုအတွက် အပြစ်ပေးခံရလားဆိုတာ အတိအကျမသိရသေးပေမယ့် သူ့ရဲ့ယာဉ်မတော်တဆကျူးလွန်မိခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်ကို အဆိုပါတံတားနားမှာရှိတဲ့ လုံခြုံရေးမှတ်တမ်းတင်ကင်မရာက မှတ်တမ်းတင်ဖမ်းယူမိခဲ့ပြီး လူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုသူအများအပြားက ၄င်းတို့ရဲ့ အကောင့်တွေမှာ မျှဝေပြသခဲ့တာနဲ့တင် လုံလောက်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ပါတယ်။
Previous ရဲစခနျးကို အလညျအပတျသှားခဲ့တဲ့ အိမျပွေးခှေးလေး Chico
Next Post Malone တဈယောကျ မကျြနှာပျေါမှာတကျတူးတှထေိုးခဲ့ရတဲ့အကွောငျးရငျး။